China Yakagadziriswa Uye Yemhando Server Server chassis, Industrial chassis, Chassis accessories Quotation, Fekitori - Goldenor Electronic Technology Co, Ltd.
Goldenor Electronic Technology Co, Ltd. inosanganisa R & D, kugadzirwa uye kutengesa, kuita dhizaini uye kugadzira rackmount chassis, server chassis, uye maindasitiri chassis. Iyo kambani yakavambwa musi wa9 / 17 muna2014. Muna 2015, yakagadzira zvigadzirwa zvayo zvakajairika. Muna 2016, yakawana pamwedzi kutumira zviuru zvishanu zveyuniti yezvigadzirwa zvakajairwa uye 30,000 mayuniti muna 2019. Iyo kambani ine chaiyo jira simbi yekugadzirisa ï¼ˆNCTï¼ ‰, chakuumbwa dhizaini uye kugadzira, uye kutsika. Kugadzira, kupenda uye kugona kugona. Panguva imwecheteyo, kambani inotora zvinodiwa nevatengi seyakadzika uye yaunganidza boka rematarenda akanakisa mumunda wehunyanzvi tekinoroji, uye inovavarira kupa vatengi imwe-yekumira yakagadziriswa mhinduro kubva kugadziriso utsva kusvika mukugadzira nhasi kana zvigadzirwa dzakanyanya homogenized. "Inokasira, yakanyanyisa, uye ine hunyanzvi" ibhizimusi raGororor, "kuvhura, kugadzira, uye kugovana" huzivi hwehutungamiriri hwaGoldenor. Chiono chedu kufunga kwepasirese uye hunyanzvi hwemhando dhizaini dhizaini uye nyanzvi yekugadzira, "mutengi-centric" Kugadzira kukosha kunozivikanwa nevatengi, kuisa vanhu pekutanga, kurega vanorwira vachigovana hupfumi hwekambani "ndiko kukosha kwedu kukuru." Kugadzira kukosha kwevatengi. "ndiko kutsvaga kusinga tsanangurike kwenhengo dzese dzeGorororor. Ticharamba tichipfuura isu pachedu nekupa vatengi zvigadzirwa zvakanaka nemasevhisi! Chigadzirwa chishandiso chiyero: chassis yekuchengetedza, cloud computing server, gore rekuchengetedza server, chassis yeindasitiri, vhidhiyo yekuongorora System, simba system chassis , GPU server, kumucheto komputa.